दसैँमा ५० हजार खसीबोका काठमाडौँ ल्याइने | Ratopati
सरकारले तीन हजार खसीबोका र च्याङ्ग्रा बेच्ने
personनिकेश खत्री exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ७, २०७८ chat_bubble_outline0
विगतका वर्षहरुमा झै यो वर्षको दसैँमा पनि सरकार र व्यापारीले गरेर ५० हजार हाराहारी खसीबोका काठमाडौँ उपत्यका ल्याउने भएका छन् । विगतका वर्षहरूमा भएको खपतलाई मध्यनजरमा राख्दै यो वर्षको दसैँका लागि उक्त सङ्ख्याका खसीबोका ल्याउने भएका हुन् ।
जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ल्याउने दुई हजार वटा खसीबोका समेत सामेल छन् । योसहित, उपत्यकाको दसैँ माग धान्न ५० हजारभन्दा बढी खसीबोका भित्रिने पशुसेवा विभागले जानकारी दिएको छ । सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले खसीबोका बिक्रेता र उत्पादकले यो वर्षको दसैँमा ५० हजारभन्दा बढी खसीबोका खपत हुने जानकारी विभागलाई दिएको बताए ।
विभागले नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासंघ, चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघ, बाख्रा पालन महिला सहकारी लगायतका संस्थासँग छलफल गरिसकेको छ । दसैँ लक्षित छलफलले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्षपनि ५० हजार हाराहारीमा खसीबोका खपत हुने निष्कर्ष निस्केको डा. ढकालले रातोपाटीलाई बताए ।
के भन्छन् उत्पादक ?
दसैँको समयमा उपत्यकाबाट हुने सबै माग नेपालको उत्पादनले नै धान्ने व्यावसायिक बाख्रा पालकहरू बताउँछन् । नेपाल व्यवसायी बाख्रा पालक महासंघ दसैँको समयमा देशभरको माग धान्ने बताउँछ ।
महासंघका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले दसैँको समयमा उपत्यकामा मात्रै ५० हजार वटा खसीबोका खपत हुने र उक्त माग धान्न तयार रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बजारको माग धान्न तयार छौँ । तर, काठमाडौँका व्यापारी ठूला÷ठूला ट्रकमा लग्न चाहन्छन् । त्यसरी, नेपाली उत्पादन लग्न मिल्दैन ।’
नेपाली कृषकले पालेका बाख्रा सङ्कलन केन्द्र नहुँदा घर–घरबाटै सङ्कलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले, एकैपटक ठूला ट्रकमा लग्न सम्भव छैन् । एकै पटक लग्दा ढुवानी खर्च जोगिने भएका व्यापारी यसरी उपत्यका ल्याउन चाहन्छन् । तर, यसरी ठूलो परिणाममा उपत्यकामा खसीबोका ल्याउन भारतबाट बाहेक सम्भव नभएकाले चोरीनिकासीको सम्भावना रहेको महासंघका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।
दसैँमा ८१ करोडको खसीबोका
यस वर्षको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा ५० हजार हाराहारी खसीबोका खपत हुने आङ्कलन छ । पशुसेवा र व्यावसायीले उक्त सङ्ख्याका खसीबोका खपत हुने आङ्कलन गरेका हुन् । उपत्यकामा बिक्री हुने खसीबोका औसतमा २५ किलो हुने कलंकी खसी बजारका व्यवस्थापक जीवन खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसअनुसार, ५० हजार खसीबोकाको औसत २५ किलो तौलले कुल १२ लाख ५० हजार किलो खसीबोका बेच्नका लागि उपत्यका ल्याइन्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६५० रुपैयाँ छ । जसअनुसार, १२ लाख ५० हजार किलो खसीबोकाको औसत मूल्य ८१ करोड २५ लाख हुन आउँछ ।
यसले यो वर्षको दसैँमा उपत्यकामा मात्रै ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खसीबोकाको मासु खपत हुने देखाउँछ ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्षको दसैँमा दुई हजार वटा खसीबोका बेच्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, एक हजार वटा च्याङ्ग्रा पनि उपत्यकामा ल्याएर बेच्ने तयारी थालेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने अधिकारीले रातोपाटीलाई बताइन् ।
उनले दुई हजार खसीबोका र एक हजार च्याङ्ग्रा किन्न व्यापार कम्पनीले करिब सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताइन् । भनिन्, ‘घटस्थापनाको दिनदेखि हामीले बिक्री सुरु गर्छौँ । त्यसभन्दा अगाडी काठमाडौँ ल्याएर राख्ने ठाउँ नि हुँदैन । त्यसैले घटस्थापनाको आसपास नै आइपुग्छन् ।’
कम्पनीले गत वर्ष १६ सय खसीबोका र १४ सय च्याङ्ग्रा उपत्यका ल्याएर बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, अन्तिममा च्याङ्ग्रा ल्याउन सकेको थिएन भने १५ सय वटा मात्रै खसीबोका ल्याएको थियो ।
कस्तो छ उत्पादन र खपतको स्थिति ?
पशु सेवा विभागका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष १ करोड २८ लाख खसीबोका र बाख्रा उत्पादन हुन्छन् । जसमध्ये ४५ लाख खसीबोका मासुका लागि योग्य हुन्छन् । यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक एक हजार २०० वटा खसीबोका मासुका काटिन्छन् । जुन, दसैँको चार दिनको अवधिमा थप ५० हजार खसीबोका खपत हुने विभागको भनाई छ ।
विभागलाई बाख्रा पालक महासंघले हालसालै दिएको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा मासिक खपतयोग्य बाख्राको सङ्ख्या २७ देखि ३० हजार हाराहारीमा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बाख्रा बागमती प्रदेशमा उपलब्ध छन् । यो प्रदेशमा १४ हजार बाख्रा मासिक खानयोग्य हुन्छन् । यी खसीबोका तथा बाख्रा यो पटकको दसैँमा पनि मासुका लागि योग्य छन् ।
यसपछि, सुदूरपश्चिममा ४ हजार, लुम्बिनी र कर्णालीमा २५÷२५ सय, प्रदेश १ र २ प्रदेशमा सम्मान २÷२ हजार खसीबोका तथा बाख्रा उपभोगयोग्य छन् । यसरी उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क महासंघमा आबद्ध ३५ सय व्यवसायीसँगको हो । महासंघमा आबद्ध नभएका र व्यक्तिगतरुपमा बाख्रा पालन गरिरहेका व्यवसायीहरूसँगको तथ्याङ्क जोड्दा ५० हजार खसीबोका खानयोग्य हुने जानकारी महासंघले विभागलाई दिएको छ ।
​सूचना अधिकारी डा. ढकालले नेपालमा वार्षिक ५ लाख ४९ हजार ३३२ मेट्रिक टन मासु खपत हुने बताए । तर, यो तथ्याङ्क खसीबोकाको मात्र नभई सबै प्रकारका मासुको तथ्याङ्क हो । जसमध्ये ३९८ मेट्रिक टन मासु भारतीय बजारबाट आउँछ भने ५ लाख ४८ हजार ९३४ मेट्रिक टन मासु नेपालकै बजारले उत्पादन गर्छ ।
यो तथ्याङ्कले नेपाल मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडी बढिरहेको विभागले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । खासगरी, २०७५ सालदेखि भारतबाट ल्याइने पशुपन्छीको क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेपछि आयात ह्वात्तै घटेको सूचना अधिकारी डा. ढकालले बताए । यससँगै, पशुपन्छीको आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा समेत आयात घटेको हो ।
विभागले भन्सार दर बढाउनुका साथै क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्न शुरु गरेपछि भारतबाट हुने आयात ठप्प जस्तै भएको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुअगाडि २०७४ सालमा भारतबाट एक वर्षमा ५ लाख २१ हजार वटा खसीबोका आयात भएका थिए । तर, २०७५ सालमा अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र भन्सार वृद्धि भएपछि घट्दै २०७७ सालसम्म आइपुग्दा जम्मा ८ हजार २०० वटा खसीबोका नेपाल भित्रिएका थिए ।
व्यवसायीलाई चोरी निकासीको डर
पशु सेवा विभागले भारतबाट हुने आयात करिब करिब रोकिएको तथ्याङ्क पेस गरेपनि व्यवसायी भने यसमा सहमत छैनन् । बाख्रा पालक महासंघका अध्यक्ष पौडेलले सरकारी निकायका आँखा छलेर भारतबाट चोरी निकासी हुने गरेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सरकारी निकायले आयात नभएको भन्सार तथ्याङ्क देखाएको ठिक हो । तर, नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले नेपालमा भारतबाट खसीबोका ल्याउँछन् ।’ भन्सार चेकजाँच हुने ठाउँबाट छलेर खुला ठाउँबाट खसीबोका आउने गरेको भनिएपनि त्यसको ठोस प्रमाण व्यवसायीसँग छैन ।
नेपालका व्यापारी ठूला ट्रक भरिने गरी खसीबोका ल्याउन बानी परेकाले चोरी निकासी हुँदै आएको पौडेलले दाबी गरे । उनले कति सङ्ख्यामा चोरी निकासी हुन्छ भन्ने भने खुलाएनन् । यद्यपि, यसले व्यवसायीहरूमा चोरी निकासीको डर रहेको देखाउँछ ।
नेपाल–रुस पर्यटन प्रवर्द्धनमा दुबै देशले सहकार्य गर्ने